kapịrị ọnụ hogweed
A maara aha Herkulesstaude n'okpuru aha Riesenbärenklau ma ọ bụ Bärenkralle. Nnukwu Uke Ojika sitere na ezinụlọ ezinụlọ nke umbels ma si na Caucasus bịa. Maka oge mbụ, osisi 1985 pụtara na Europe.
Hercules shrub / nnukwu hogweed
Mkpuru osisi Hercules nwere ike iru mita atọ. A na-ahụ ọnyá na-acha uhie uhie ma nwee ntutu isi dị mma nke dị na osisi ahụ dum.
Nnukwu agba agba - MabelAmber / Pixabay
Akara nke osisi ahụ dị abụọ na sentimita iri, dabere na mkpokọta nke osisi ahụ. Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke nnukwu hogweed nwere ihe dị otu mita n'ogologo. Osisi ndị buru ibu na-enwekarị elekere nke 30-50 centimeters. Hercules shrub nwere ike inwe ruo 80.000 otu okooko osisi.
Oge okooko osisi sitere na June ruo na njedebe nke ọnwa July. Osisi ndị na-acha ọcha nwere akara kachasị elu nke 2 centimeters ma na-eto eto na elu. Ebe ọ bụ na acha ọcha na-acha akwụkwọ ndụ na-ele anya dị nnọọ ka anụ ọhịa anụ ụkwụ, a na-akpọ osisi ahụ Bärenklau n'ihi nke a.
Mgbe mkpụrụ osisi a mịpụtara, mkpụrụ osisi ahụ anwụọ. Ọ bụrụ na osisi ahụ adighi chara n'onwe, ọ ga-adị mfe ịnwụ ruo ọtụtụ afọ. Mkpụrụ nke Herkulesstaude dị nnọọ njọ ruo ọtụtụ afọ.
Mkpuru osisi Hercules anaghị eto n'elu ala acid. Ma ọ bụghị ya, ọ na-adịchaghị njọ, ọ dịkwa naanị obere anyanwụ ka ọ ga-adịgide ndụ ruo ọtụtụ afọ.
Akwukwo hogweed nwere ihe a na-akpọ furocoumarins, nke na-ebute mmeghachi akpụkpọ anụ mgbe akpọrọ akpụkpọ ahụ.
Ọbụna kọntaktị dị mkpirikpi na epupụta nwere ike ịchacha ọbara ọbara. N'ọnọdụ ndị ka njọ, ọbụna nro nwere ike ịmalite na akpụkpọ ahụ. Ihe ndị a na-egbu mgbu ma na-adị ọkụ ngwa ngwa ma nwee ike ime ka nrịrịba nke mbụ na nke abụọ na-ere ọkụ.
Na mgbakwunye na mgbasasị anụ ahụ, na ịkwa ákwá na-enwekwa ike ịbịara ụfụ, nsogbu ọbara na ịcha. Mmeghachi omume ndị a nwere ike iwe izu.
Mgbe ị na-esonyere osisi ahụ, ị ​​kwesịrị ịsacha akpụkpọ anụ ahụ na-acha ọcha na mmiri na ncha. Ọ bụrụ na mgbakasị anụ ahụ emeela, a ga-enyocha onye na-ahụ maka ọgwụ ahụ ozugbo ka e nwee ike iji ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị mee ihe.
N'adịghị ka Claw Clair Big, Ugbo Hogweed bụ nwa amaala na Europe. N'ụzọ bụ isi, ị na-ahụ Oké Nkume Oke Izu na ọdọ mmiri na ọdọ mmiri ma na-etolite mma na ooh, ala ala. N'ihu anya, osisi abụọ ahụ yiri nke yiri ya.
Ọ bụrụ na osisi ahụ bụ nwata, ọ dịghị ihe ize ndụ nke nsị ya. A na-ejikarị akwụkwọ ahụ eme ihe dịka nri anụ ụlọ. Otú ọ dị, ụmụ anụmanụ ekwesịghị ịbabiga ókè na ya, n'ihi na ọ nwere ike ịkpata mgbakasị ahụ. Dabere n'ụdị osisi ndị na-eto eto, enwere ike iri mkpụrụ osisi ahụ, ma ọ bụ esi esi ya.
Na-ese foto osisi